Ntụgharị Asụsụ Korea, Ịsụgharị, Ọrụ Nsụgharị - Peeji nke Mbụ
Ịghọta Asụsụ Korea & Inye Ọkachasị Nsụgharị Korea, Ndị Nsụgharị na Ndị Na -edegharị Ihe
Ọrụ Asụsụ Amerịka (AML-Global) ghọtara mkpa ọ dị ịrụ ọrụ n'asụsụ Korea. Ruo ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ anọ nke otu narị afọ, Ọrụ Asụsụ Amerịka ejirila asụsụ Korea na ọtụtụ narị ndị ọzọ si gburugburu ụwa rụọ ọrụ. Anyị na -enye ọrụ asụsụ zuru oke awa 24, ụbọchị asaa n'izu n'ụwa niile site na ịnye ọrụ ntụgharị asụsụ Korea, ntụgharị na ntụgharị yana narị narị asụsụ na olumba ndị ọzọ. Ndị na -asụ asụsụ anyị bụ ndị na -asụ asụsụ obodo na ndị edemede na -enyocha, nzere, gbaara asambodo, nwalere ubi ma nwee ahụmịhe n'ọtụtụ ntọala ụlọ ọrụ akọwapụtara. Asụsụ Korea bụ ihe pụrụ iche ma nwee ezigbo mmalite na njiri mara ya.
Ọdịiche na ọdịiche nke North Korea na South Korea
Korean bụ asụsụ gọọmentị North Korea na South Korea. Ihe mejupụtara mpaghara mpaghara yana mba abụọ nwere onwe, North Korea na South Korea bụ akụkụ abụọ nke otu mkpụrụ ego ma a bịa na ọdịiche na myirịta na ọdịbendị, asụsụ na akụkọ ihe mere eme. A maara South Korea maka teknụzụ nwere oke agụụ na atụmanya ọdịnihu nke ndụ kwa ụbọchị. Ọtụtụ ihe a na -eme taa n'ihe banyere teknụzụ dị oke ọnụ ka ejirila na ndụ kwa ụbọchị ndị South Korea. N'ụzọ dị iche, North Korea anaghị akwalite iji teknụzụ dị arọ na ndụ ụmụ amaala ya kwa ụbọchị. Na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, South Korea bụ nke onye kwuo uche ya ebe North Korea bụ Ọchịchị Kọmunist. Ha abụọ nwere ndị ndu chọrọ ọchịchị ma bụrụ ndị ọchịchị aka ike. E nwere ikuku nke enweghị ntụkwasị obi. N'oge agha Korea, ndị ike siri ike dabere na ndị agha ha ịkwado ha abụọ. Ha abụọ chọkwara ime ka mba dị n'okpuru ha dịrị n'otu. Nnukwu mgbanwe mmekọrịta ọha na eze na North Korea, na ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya, nke dị nnọọ iche na nke ahụ na South Korea, nwere ike ịkọwa oke mgbanwe igwe mmadụ na myirịta dị na steeti abụọ a.
Nhazi ọkwa nke asụsụ Korea
Achọpụtaghị nhazi ọkwa nke asụsụ Korea ọgbara ọhụrụ, na n'ihi enweghị echiche ọ bụla nabatara nke ọma, a na -akọwa ya mgbe ụfọdụ dị ka asụsụ kewapụrụ iche. Korean yiri asụsụ Altaic n'ihi na ha abụọ enweghị ụfọdụ ihe ụtọasụsụ, gụnyere ọnụọgụ, okike, edemede, njikọta ụda, olu na nnọchiaha ndị ikwu. A na -ahụkwa na ọ nwere ike bụrụ na Korean nwere ihe jikọrọ ya n'ụzọ ụfọdụ na Japanese, ebe asụsụ abụọ ahụ nwere ihe gbasara ụtọasụsụ, na kerịta ọtụtụ ọnụọgụ ekwe ntị.
Ndị na -asọpụrụ n'asụsụ Korean
Mgbe ị na -ekwu maka onye nọ n'ọkwa dị elu, ọkà okwu ma ọ bụ onye edemede na -ejikarị okwu pụrụ iche ma ọ bụ njedebe ngwaa iji gosipụta ịdị elu nke isiokwu ahụ. Na mkpokọta, mmadụ ka ọkwa ya elu ma ọ bụrụ na ọ bụ onye ikwu merela agadi, onye ọbịa nke ihe ya na ya hà nhata ma ọ bụ karịa, ma ọ bụ onye were n'ọrụ, onye nkuzi, onye ahịa, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ. Mmadụ nhata ma ọ bụ dị ala karịa n'ọkwa ma ọ bụrụ na ọ bụ onye ọbịa, nwata akwụkwọ, onye ọrụ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ. N'oge a, enwere ngwụcha pụrụ iche nke enwere ike iji na ahịrịokwu, ịjụ ajụjụ, yana ahịrịokwu dị mkpa, yana ahịrịokwu ndị dị nsọ ma ọ bụ nke nkịtị. Emere ha maka iji Korean eme ihe ngwa ngwa na ngwa ngwa.
Kedu onye ị ga -atụkwasị obi na mkpa asụsụ Korea gị dị mkpa?
Asụsụ Korea bụ asụsụ dị mkpa n'ụwa niile. Ọ dị mkpa ịghọta ọdịdị n'ozuzu ya na njirimara nke Korea. Kemgbe 1985, AML-Global enyela ndị ntụgharị okwu Korea, ndị ntụgharị okwu na ndị na-edegharị ederede zuru ụwa ọnụ.
Nje virus butere United States na Machị 2020 ma ọ gara n'ihu na -agbanwe gburugburu ọrụ anyị ma na -amachi mmekọrịta onwe onye. Anyị ghọtara na nke a nwere ike bụrụ ụkpụrụ ọhụrụ nwa oge wee nwee obi ụtọ ịnye gị nhọrọ dị egwu maka ntụgharị asụsụ nkeonwe.
Ọrụ ntụgharị asụsụ na ọrụ asụsụ Koren n'ime ụwa na-agbanwe agbanwe
Nhọrọ Nchekwa, Ọdịmma, yana Nhọrọ Ịsụgharị Ọfụma
(OPI) N'ịkọwa okwu ekwentị
Anyị na-enye N'ime ntụgharị asụsụ ekwentị (OPI) n'ihe karịrị asụsụ 100. Ọrụ a dị ụbọchị 7 /24 awa ma zuo oke maka ọrụ dị mkpụmkpụ yana ndị na -anaghị anọkarị oge azụmahịa. Nke a dịkwa mma maka ịhazi oge ikpeazụ, dị ọnụ ala ma dịkwa mfe iji. A na-enyekwa nke a ma ahaziri tupu & ihe achọrọ na. Pịa ebe a maka ozi ndị ọzọ.
(VRI) Ntughari vidiyo dịpụrụ adịpụ
A na -akpọ sistemụ VRI anyị Mebere njikọ enwere ike iji ya ma emebere ya na nke achọrọ. Ndị ntụgharị okwu anyị dị ụbọchị 7/awa 24. Ọ dị mfe ịtọlite, ntụkwasị obi, ọnụ ahịa, yana ịrụ ọrụ nke ọma. Pịa ebe a maka ozi ndị ọzọ.